Guddiga Doorashooyinka oo qodabo ka soo saaray dhacdadii Jowhar | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Guddiga Doorashooyinka oo qodabo ka soo saaray dhacdadii Jowhar
Guddiga Doorashooyinka oo qodabo ka soo saaray dhacdadii Jowhar
Guddiga doorashooyinka Dadban ee Soomaaliya ayaa maanta fasaxay inay dib u bilaabato Doorashada xubnaha Aqalka Hoose ee matalaya Maamulka Hirshabelle.
Guddiga ayaa qadobo ka soo saaray dhacdadii Jimcihii lasoo dhaafay ka dhacday M Jowhar.
Waxaa ay hakiyeen kursigii booqa ka dhaliyay doorashada Aqalka Hoose .
Halkan ka akhriso war-saxaafadeed-ka Guddiga.
In dib loo dhigo doorashada kursiga khilaafku ka dhashay ee Beesha Jidle/ Gugundhabe, iyadoo guddi isku dhaf ah oo ka kooban Guddiyada Doorashada heer Federaal, Dowlad Gobol ee doorashayinka, Guddiga Xallinta Khilaafaadka, iyo maamulka Hirshabeelle ay si wadajir ah go’aan ay uga gaari doonaan kursigaasi, baaritaan kadib.
Previous articleAfar xildhibaan oo maanta lagu doortay Jowhar
Next articleDoorashada Aqalka Hoose oo maanta lagu soo gebagebaynayo Magaalada Kismaayo